လသားအရွယ်သမီးလေးကို ရောဂါပိုးတေကူးစက်ခံရမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ မေမေ ခင်လွှမ်း – Cele Top Stars
လသားအရွယ်သမီးလေးကို ရောဂါပိုးတေကူးစက်ခံရမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ မေမေ ခင်လွှမ်း
July 29, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ မိခင်တိုင်းက ကိုယ့်သားသမီး နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မှာကို အရမ်း စိုးရိမ်တတ်ကြသူတွေပါနော်။ ဒီထဲတွင်မကြာခင်က သမီးဦးလေး မွေးဖွားထားတဲ့ မေမေခင်လွှမ်းလည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ ပြင်ပတွင် ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နေရတာတွေကို မြင်တိုင်း သမီးလေး အတွက် စိုးရိမ်ပူပန် နေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ခင်လွှမ်းကိုယ်တိုင် အပြင်လုံးဝမထွက်ပဲ သမီးလေးကို အရိပ်တကြည့် ကြည့်နဲ့ ပြုစုနေတာပါ။ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးဖြစ်တာကြောင့် လုံးဝအပွန်းအပဲ့ မ ခံနိုင်တဲ့ မိခင်မေတ္တာတရားက အရမ်းကို ကြီးမားလွန်းပါတယ်..။
” မေ့သမီးလေး ဘာမှဖြစ်လို့မရဘူးနော် 🥺 . မေမေအရမ်းချစ်တယ် ❤️ ” ဟုဆိုတဲ့ caption နဲ့ မိသားစုသုံးယောက်ပုံလေးကိုပါ တင်ထားပါတယ်။ သမီး လေးကို ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မေမေခင်လွှမ်းအတွက် အားပေးစကားများ ပြောပေးသွားကြပါဦး။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာ
ယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ မိခငျတိုငျးက ကိုယျ့သားသမီး နထေိုငျမကောငျးဖွဈမှာကို အရမျး စိုးရိမျတတျကွသူတှပေါနျော။ ဒီထဲတှငျမကွာခငျက သမီးဦးလေး မှေးဖှားထားတဲ့ မမေခေငျလှမျးလညျး အပါအဝငျပါပဲ။ ပွငျပတှငျ ကိုဗဈရောဂါပိုးတှေ ကူးစကျနရေတာတှကေို မွငျတိုငျး သမီးလေး အတှကျ စိုးရိမျပူပနျ နတော ပဲဖွဈပါတယျ..။
ခငျလှမျးကိုယျတိုငျ အပွငျလုံးဝမထှကျပဲ သမီးလေးကို အရိပျတကွညျ့ ကွညျ့နဲ့ ပွုစုနတောပါ။ တဈဦးတညျးသော သမီးလေးဖွဈတာကွောငျ့ လုံးဝအပှနျးအပဲ့ မ ခံနိုငျတဲ့ မိခငျမတ်ေတာတရားက အရမျးကို ကွီးမားလှနျးပါတယျ..။
” မသေ့မီးလေး ဘာမှဖွဈလို့မရဘူးနျော 🥺 . မမေအေရမျးခဈြတယျ ❤️ ” ဟုဆိုတဲ့ caption နဲ့ မိသားစုသုံးယောကျပုံလေးကိုပါ တငျထားပါတယျ။ သမီး လေးကို ရငျအုပျမကှာ စောငျ့ရှောကျနတေဲ့ မမေခေငျလှမျးအတှကျ အားပေးစကားမြား ပွောပေးသှားကွပါဦး။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာ
ယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။
အရင်လိုပဲ ဟင်းတွေချက်ပြီး ဈေးပြန်ရောင်းတော့မယ့်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ အိစိကွေး
မနေ့က ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော် ရဲ့မိခင်ကြီး